Exploring The Best Discoveries With College Nomudzimai | Save A Train
musha > Travel Europe > Exploring The Best Discoveries With College Nomudzimai
(Last Updated On: 25/12/2020)
Paaifamba ari boka pakoreji kumadhindindi, zviri zvakakwana kunaka asina avaiita uye kungova kwatangwa. Pandakatenderera nzvimbo isina zvinotarisirwa kana asati varonga chaizvoizvo nzira kuziva pfuma yakavanzwa akanakisisa. Kunosiya nzvimbo yakakwana kuti mafaro uye uncensored ubanguranyika. saka, unotanga kupi iwe neshamwari dzako kana uchida kugadzira zviwanikwa zvechokwadi usina kuomerera pakuita? Ungawana sei zvakanaka zvakawanikwa pamba? Ndedzipi sarudzo dzako?
tsime, raki iwe, zviri ikozvino zvinobvira kuti nyepera ndege kuchengetedza kuti vhiza asina kuripira ndege tikiti kana pakufamba avaiita. Unokubvumira yokufamba isina urongwa. kunze kwaizvozvo, zvemichina akaita mepu uye mumabhuku nyore, saka unogona kuvimba zvizere pafoni yako mazano kufamba. Heano 5 mamwe mazano nokuti kusora zvakanakisisa Zvakawanikwa pamwe kukoreji mates:
1. Joinha Yemahara Kufamba Kwekufamba
Search uye kunyoresa mahara kufamba Tours pazuva rako rokutanga muguta idzva. Ndivo nyore kuwana – kungokumbira vepachikoro pahotera unenge kupedza usiku wokutanga, kana kumubvunza nevamwe vafambi mudzidzi zvaunowana hostel yako. Kutsvaga nekukurumidza pane internet zvakare kuchakubatsira iwe kuwana yakanaka kufamba kwekusununguka. Cherechedza kuti kunyange zvazvo Tours vari zvikurukuru pachena, zvakanaka kuti uise parutivi diki bhajeti rako kuperekedza vatungamiriri vevashanyi.
vakasununguka kufamba nzendo basa sei? Ungawana akasununguka kufamba runobudirira nokuda zuva uye nguva apo iwe uchava kuwanikwa, iwe kusaina kumusoro, musangano pfungwa inotaurwa newe, munoratidza panguva iyoyo iri nguva, uye ipapo iwe siya zvimwe zvose kuti revashanyi gwaro. The rerunziro vanozoona gwaro kuchakubatsira kuwana guta uye kumucheto ayo nyore uye vowana zvakadzama kunzwisisa kuti guta rakasiyana akitekicha uye mutsika.
2. Zvipe Get Lost
Zvino kuti ane ruzivo rwavakaita gwaro akubatsirai kuwana nzvimbo dzakawanda muguta, zviri ikozvino nguva kuwana kure panguva chibhubhubhu chiteshi uye kuongorora nezvakapoteredza uri woga. Nemaune kunzvenga touristy kunzvimbo uye "kurasika" mugungwa vanhu. Uye nekuti iwe uri shamwari, haufaniri kunetseka zvakawanda pamusoro kuchengeteka. Uchawana zvakawanda matombo anokosha akavanzwa – Zvinhu hapana nzvimbo akamboona pamberi. Zvichabatsira kana uri yakazarukira kutaura vatorwa nokuti hapana kuchakubatsira kuona guta kupfuura veko.
3. Shandisa Google Mepu
Google mamepu kana Apple mepu zvakanaka, kunyangwe Apple isingakwanise kurova nekufungidzira uye Google mamepu ane. Pamwe imhaka yokuti vazhinji vanoshandisa Indaneti kuti Android-dzinofambiswa namano, saka vazhinji mushanyi rwendo Wongororo zvinoitwa musi Google Map. Kudzidza Google map imwe nzvimbo nemabasa here zvakanaka boka rokufambira – Rinopa chakakwana pfungwa zviri vakakupoteredza. Google Wongororo vachakuudza kwamuri yakanakisisa nzvimbo kudya, apo kuwana waini yakanaka, uye vanoyambira iwe pamusoro apo kwete kushanya somunhu mufambi pakoreji. anobatsira iwe kuongorora uye kuziva zvakawanda.
4. Vanopinda Events Local
Kana usingade vachidzungaira mumigwagwa pasina chinangwa wainyatsotaura, wadii kuenda chiitiko womunzvimbo iyoyo? Kumbira kumativi hwekutengeserana nhumbi, unyanzvi inoratidza, Concerts, kana mitambo uye kunyudza uri mumwe wavo. Kana rudo mitambo, enda kunhandare kana kuenda kumutambo wenhabvu yemugwagwa. Unogona kunyange kutamba veko kana vari vaeni zvakakwana. Izvi vachakupai rakadzika maonero muguta uye kubvumira kuti kushamwaridzana veko uye kuwana matambudziko avo zuva uye mufaro – sezvinoita munharaunda. Mhanyai yedaro refu kana ukavimba yako kumhanya kugona. Kukwikwidzana enyu madzimai ndicharizivisa zvakatowanda mafaro.
5. Zvireruke Social Media
Facebook Wongororo vachakuudza apo kuenda war pamwe kukoreji neshamwari, chii kuona apo ikoko, uye zvose unofanira kuziva kuti rwendo. Ingojoinira koreji vafambi 'boka rako raunosarudza, revai Facebook, uye sarudza pfungwa ruzivo nhengo. Social vezvenhau iri yangu nendarama kuunganidza mashoko anokosha kubva kuvanhu vane akazvionera ruzivo kuti nharaunda kupiwa.
Kupedza, Ose zuva riri mukana ane kudzidza kuti chero boka chinzvimbo muduku pakoreji vafambi. Just vane kuronga zvakakodzera kwenyu utano uye pakufamba inishuwarenzi, asi usazvidzikisira iwe kune yakatarwa mafambiro. Regai zvenyu kuziva muduku kuzviremekedza kuongorora uye vaone uye kana iwe aifarira nyaya yedu, ipapo rayirai yako chitima matikiti kubva Save A Train.
Unoda embed yedu Blog romukova “Exploring The Best Discoveries With College Nomudzimai” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ane kubatana uku Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fdiscoveries-college-mates%2F%0A%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Munyaya inotevera batanidzo, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- Link iyi nokuti Chirungu pakutengeserana kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura Ave kuti ja kana of uye mimwe mitauro yaunenge wasarudza.
College CollegeMates Discoveries famba Travelingtips
I am a business analyst, and a financial instructor who has been researching self-development for the past two years and now is off travelling the world. I am also a marathon runner and have set running the Great Wall Marathon as a lifetime goal! My life mission is to inspire others to live their dreams. - Unogona baya pano ndibate